Nhau - Chii chinonzi Check Valve?
Tarisa mavharuvhu inowanzoiswa paipi yekudzivirira kudzoka. Valve yekutarisa inongova nzira imwe vharuvhu, kuyerera kunogona kuyerera zvakasununguka munzira imwe chete, asi kana kuyerera kukatenderera, vharuvhu ichavharwa kuchengetedza pombi, mamwe mavhavha, mapampu, nezvimwewo. vharuvhu haina kuiswa, sando yemvura inogona kuitika. Nyundo yemvura inowanzoitika nesimba rakanyanyisa uye inogona kukuvadza nyore nyore mapaipi kana zvikamu.
Zvinhu zvekuteerera paunenge uchisarudza cheki vharuvhu
Kana uchisarudza cheki vharuvhu, zvakakosha kuitisa mutengo-kubatsirwa kuongorora kweimwe sisitimu. Izvo zvinowanzo tarisirwa kudzikisira mutengo uku uchitsvaga yakaderera inogoneka yekumanikidza kurasikirwa, asi kune cheki mavharuvhu, yakakwira kuchengetedzwa yakaenzana yakakwira kumanikidza kurasikirwa Naizvozvo, kuitira kuti ive nechokwadi chevharuvha yekudzivirira system, yega sisitimu inoda kuongororwa zvakasiyana, uye zvinhu zvakaita senjodzi sando yemvura, inogamuchirwa yekumanikidza kurasikirwa, uye mhedzisiro yemari yekuisa cheki vharuvhu inofanirwa kutariswa sando yemvura.
Kuti ukwanise kusarudza iyo chaiyo cheki vharuvhu kune yako kunyorera, kune akawanda sarudzo sarudzo iyo iwe yaunofanirwa kufunga nezvayo. Chekutanga pane zvese, hapana imwe mhando yevhavha yekutarisa ndiyo sarudzo yakanakisa kune ese mashandisirwo, uye nzira yekusarudza haina kukosha zvakaenzana kune ese mamiriro.
Dzimwe sarudzo dzekufunga nezvekusarudza cheki vharuvhu
Zvimwe zvinhu zvaungangoda kufunga nezvazvo zvine hunyoro kuenderana, kuyerera hunhu, kurasikirwa musoro, zvisingaite maitiro, uye mutengo wakazara wevaridzi. Kuti uwane basa rakanakisa, zvirokwazvo zvakakosha kuti usarudze vharuvhu zvinoenderana nemaitiro enzira dzakasiyana dzekumisikidza.
Ose mavharuvhu ekuongorora anoshandiswa kurapa mvura nekurapa mvura yakasviba, asi kurapwa kwemvura yakasviba / tsvina kunogona kukonzera mamwe matambudziko. Paunenge uchisarudza mavhavha emvura idzi, iwe unofanirwa kufunga nezvekuti kuvapo kwezvinhu zvakasimba kungakanganisa sei kushanda kwevhavha.
Kana iyo vharuvhu yekutarisa ikavhara nekukurumidza, zvinokwanisika kudzivirira kurova. Zvisinei, kuvhara nekukurumidza hakudziviriri kuwedzera kunoitika apo pombi inotanga uye inodzima. Kana iyo vharafu ikavhura (uye ikavhara) nekukasira, kuyerera kwehuwandu kuchachinja nekukasira uye kuwedzera kungangoita.
Valve musoro kurasikirwa ibasa re fluid velocity. Valve yemusoro kurasikirwa inokanganiswa nemamiriro ekuyerera echirongwa uye nechomukati chevhavhavha. Iyo geometry yemuviri wevharuvhu uye dhizaini yekuvhara inosarudza kuyerera kwenzvimbo kuburikidza nevhavha uye nekudaro inokanganisawo kurasikirwa nemusoro.
Iko kurasikirwa kwemusoro kunofungidzirwa ndiko kusanganisa kweiyo static musoro (inokonzerwa nekukwirira musiyano) uye yekukweshera musoro (inokonzerwa nepombi uye vharuvhu yemukati). Pamusoro peiyi hwaro, kune mafomula mazhinji evharuvhu headloss uye yakatarwa kukosha. Iyo yakajairika inogona kunge iri kuyerera kwekuyerera kwehuwandu hwemvura inopfuura nepakati pevhavha ine imwe yekumanikidza kudonhedza mune imwe nguva yenguva. Asi pakuenzanisa, zvinofungidzirwa kuti iyo resistivity Kv ndiyo sarudzo yakanakisa.
Yese mutengo wevaridzi
Mari yevhavha yako yekutarisa inogona kusanganisira zvinopfuura mutengo wekutenga. Kune kumwe kumisikidza, mutengo wakakosha kwazvo pamwe kutenga uye kuisirwa, asi mune zvimwe zviitiko, mari yekuchengetedza kana yemagetsi inogona kunge yakakosha kana kutonyanya kukosha. Paunenge uchishandisa mutengo seyero yekusarudza cheki vharuvhu, mutengo wese pamusoro pehupenyu hwevhavha unofanirwa kutariswa. Muzhinji, iyo yakapusa vharuvhu dhizaini, iyo yakaderera iyo yekuchengetedza inoda
Tarisa vharuvhu slam inokonzera iyo system kumanikidza kuchinja. Nhanho yekutanga mune ino maitiro kudzosera kuyerera kana pombi yamira. Izvi zvinogona kukonzera kumwe kudzoka kuburikidza nevhavha vharuvhu isati yasvika pane yakazara yakavharwa nzvimbo. Ipapo iyo yekuyerera kuyerera yakavharwa, uye shanduko mukuyerera mwero inoshandura iyo kinetic simba remvura kuita kumanikidza.
Iyo slam inonzwika senge ruzha rwunoitwa kana disc kana bhora revhavha yekuongorora ichirova chigaro chevhavha, uye inogadzira ruzha rukuru. Nekudaro, ruzha urwu harukonzerwe nekuvharwa kwemuviri, asi nemafungu eruzha anogadzirwa neanomanikidza spike anotambanudza rusvingo rwechubhu. Kuti udzivise kurova zvachose, vharuvhu yekutarisa inofanirwa kuvharwa pasati paita reverse velocity. Nehurombo, izvi hazvina kuitika. Iyo geometry yevhavha inoona kuti ingani backflow ichaitika, saka nekukurumidza iyo vharuvhu inovhara, iko kushomeka kurovera.